Carwo ganacsi 2021
Carwadii Ganacsiga Guga Soo Dejinta iyo Dhoofinta ee 2021 ayaa lagu qabtay Magaalada Shijiazhuang, Gobolka Hebei, Shiinaha. Shirkaddayadu waxay ku guuleysatay mug weyn oo iib ah oo ku yaal booth No. 22, waxayna kaqeyb qaadatay waxqabadyada iibka gaarka ah iyo dhiirrigelinta qolka warfaafinta. Wax soo saarkayagu si aad ah ayuu u ammaanay qof walba.
Iibinta hadhuudhku waxay umuuqataa mid faa iido badan
Odhaahda "waxyaabo way kala duwan yihiin" sanadka 2020 waa in la cadeeyo waxa ku saabsan saameynta COVID-19 ee kaliya wax walba. Laakiin waxaa jiri kara hal dhinac oo ka mid ah suuqa hadhuudhka halkaasoo hadal-haynta ay ka sii badan tahay, taasina waxay saameyn ku yeelan kartaa go'aankaaga kaydinta ee hadhuudhka maaddaama goosashada ay bilaabanayso inay hoos u dhigto guriga ...
Mashiinka Dahaarka Mashiinka Mashiinka Dahaarka
Mashiinka Daahan Mashiinka, Daaweynta Mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo lagu saleynayo isku dhafka aragtida iyo dhaqanka. Qeexitaanka alaabta: Waxsoosaarka ugu badan: 5000kg / saacad (0-5000kg) Awoodda taageerada: Awoodda kororka korantada 1.5kw: Isticmaalka korantada 120W Tirada: 1.6 darajo / saacad Qaadista dhererka: 90 cm Miisaanka: 170 ...
4.3m Gabion mashiinka shabaqa / mashiinka mesh silig Hexagonal / Hot Hot iibinta gabion mashiinka ee Shiinaha sharaxaad
Gabionkeenu waa sanduuq mesh silig afar geesle ah oo laga sameeyay mesh laba geesood ah oo qaloocsan iyo weldmesh silig bir ah, oo lagu daro xoojinta selvedges ee silig culus oo ku ordaya geesaha iyo diaphragms transverse. Sanduuqyadan mesh waxaa la galiyaa goobta oo si buuxda loo buuxiyay, halkaas oo ay isugu yimaadaan ...
Tiknoolajiyada farsamaynta digaagga: Digaagga dedan | 2020-08-31
Mid ka mid ah siyaabaha ugu waawayn ee ay ku baaraandegyada digaagga ay qiimo ugu daraan wax soo saar kasta waa rootiga. Labada sababood ee ugu waawayn ee ay processor-radu ugu daraan burcadka digaagga ayaa ah inay xoojiyaan ama ku daraan dhadhan iyo muuqaal. "Waxaan rumeysanahay inay jiraan laba nidaam oo rootiga ugu muhiimsan ee warshadaha digaagga, guryaha iyo guryaha codsiyada," ayuu yiri ...
Mashiinka xulashada abuurka macaamiisha Dubai ayaa diyaar u ah gaarsiinta
Mashiinka xulashada abuurka macaamiisha Dubai ayaa diyaar u ah gaarsiinta, waad ku mahadsan tahay taageeradaada iyo aqoonsigaaga.
DW200-2000 Wareeg culus oo culus oo looxidhay Saxaafad Dareemtay
Tani waxay quseysaa in la tolo waraaqo xoog badan oo sameysmaya saxafad tolmo leh oo la dareemay jilicsanaanta runta ah, gaar ahaan qalabka wax lagu duubo ee giraan leh.
Amarka macaamiisha 2020 Uganda
Waad ku mahadsan tahay macaamiisha ku nool Uganda iibsiga 5XZFHS-25 abuurka nadiifinta.
Baaxadda codsiga iyo faa'iidooyinka isku-urursanaanta culeyska gaarka ah
Uruurinta culeyska gaarka ahi waa ku habboon yahay, way fududahay in la beddelo shaashad mesh kala duwan. Waxaa loo isticmaali karaa qaadista. Baaxadda la adeegsan karo: Waxaa loo isticmaali karaa iyadoo la beddelo dusha shaashadda qeexitaannada iyo qaababka kala duwan: 1. wuxuu leeyahay isku dheelitirnaanta cufnaanta cufnaanta cufnaanta dhammaan noocyada lamaanaha granular ...
Mabda'a shaqada ee mashiinka xulashada
Qaabkee ayuu killerku u xulaa abuurka? Waa maxay mabda'a mashiinka xulashada? Waa maxay baaxadda ku habboon ee mashiinka xulashada? Mashiinka kala soocida wuxuu ku saleysan yahay mabda'a ah in walxaha iyo kala soocida cufnaanta ay ku dhici doonto habka dheecaanka ee maaddada granular ...
Maxay yihiin astaamaha qalabka wax lagu wareejiyo
Wareejinta Wareejinta waxay leedahay astaamaha soo socda: 1) Qaab dhismeedku waa mid fudud oo kharashkuna waa yar yahay. 2) Shaqo lagu kalsoonaan karo, dayactir fudud iyo maarayn .. 3) Cabbir is haysta, cabbirka qeybta yar oo iskutallaab ah, raad yar. Meesha laga soo galo ama laga baxo, qolka shaqaaluhu si fudud ayaa loo furaa ...